Umatshini wokuqhekeza isanti factory - China umatshini wokuqhumisa isanti abavelisi, abaxhasi
Izixhobo ezingashukumiyo ezinothuli ezinokuqhekeka zendlela / iBridge / Sheet
Ukurisayikilisha umatshini wesanti, esetyenziswa ngokubanzi ngentsimbi engenasici, oomatshini, iinqanawa, oololiwe, imibhobho yeoyile
iibhoyili kunye nolwakhiwo lwamazibuko kunye namanye amashishini esakhiwo sentsimbi ukususwa komhlwa, ukomeleza umphezulu;
Ingasetyenziselwa inkungu yentsimbi engenasici engenanto. Matte, ubuhle be-pickling passivation kunye neglasi, ilitye kunye nezinye izinto zokukrola, ukutshiza ukulungiswa kokuhlobisa.
Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona umatshini we-sandblasting wohlulwe waba yinxalenye yesanti kunye nendawo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, xa kuthelekiswa nomatshini wendabuko wesanti,
eyona nto iphambili kuyo inokuba ngumatshini oneenjongo ezininzi. Xa iimfuno zokhuselo lokusingqongileyo zingqongqo,
inokusetyenziswa njengomatshini wokurisayikilisha owusebenzise ngokutsha; Kwaye akukho mfuneko yokhuselo lokusingqongileyo, kwaye abasebenzi banamanyathelo okhuseleko
Unokuba nesanti yesanti yodwa njengomatshini ovulekileyo wesanti, uphucule ukusebenza kakuhle, emva kokuhamba kwesanti
kwaye ke indawo yokubuyisa esirhabaxa somsebenzi wokucoca isanti, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Amanzi esirhabaxa Heavy umsebenzi isanti ukuqhumisa umatshini 300L
Umsebenzi onzima womoya oomatshini beSandblast
■ isanti evulekileyo esebenzayo ukucoca indawo yokusebenza entsonkothileyo
■ Icebo lokucoca ulwelo lokucoca amanzi linokuwuphucula kakhulu umgangatho wobonelelo lomoya
Working Irediyasi esebenzayo inganyuswa iye kwiimitha ezingama-30 kwaye inqanaba lonyango lomphezulu lungayi-SA2.5-3
■ Ilungele uluhlu olubanzi lwesanti egudileyo, isanti yolwandle, isanti ye-quartz, isinyithi sobhedu, isanti ye-corundum, isanti yentsimbi, njl.
■ Ukonga umbane kunye nokukhanya kokusebenza kwezinto zentlabathi. Ugcino lokonga umbane kunye noyilo oludibeneyo lokukhanya
Pneumatic Sandblast IKhabhinethi Deadman Double Sandblaster Imipu Sandblasting Tank umphezulu Ukucoca Machine 150L-3000L
isetyenziswe kwisikali semathiriyeli ekhethekileyo, ukuqhubekeka kwezinto zomsebenzi onzima, ukusebenza kwezixhobo ze-sandblasting eziphezulu
sisakhiwo esikhulu sesinyithi ngaphambi kokucoca ukususwa kwerusi, ukongeza kwepeyinti, ukwehla, ukomeleza umphezulu
Ukuphelisa uxinzelelo lwangaphakathi sisixhobo esifanelekileyo. Izixhobo zinomthamo omkhulu wokulayisha isanti, ubungakanani obukhulu bokumiselwa kwemipu
phantsi kweemeko ezaneleyo zemithombo yomoya, sisixhobo esinamandla sokususa isanti kunye nomhlwa kubasebenzisi, ukusebenza kwayo ngokugqwesileyo kwesanti kwenza ukuba kube nzima ukusebenza konyango lomphezulu
Working Irediyasi esebenzayo inganyuswa iye kwiimitha ezingama-30, kwaye inqanaba lonyango lomphezulu lingayi-SA2.5-3
Isanti ezenzekelayo ukuqhumisa ikhabinethi enemipu emi-4 yokuqhumisa imou
Iikhabhathi zeSandblasting ziqhuba iimveliso ezahlukeneyo, ezinje ngamavili e-alloy, ukungunda, umfanekiso oqingqiweyo, iimoto, njl.
Ikwaxhasa ukucoca, ukuphazamisa, ukwehla, ukususa umhlwa, ukuvuselela isinyithi okanye isinyithi
workpieces ukufumana umphezulu egudileyo kwaye ucocekile kubasebenzisi ekupheleni, okanye ukuba pretreatment ukuze kusetyenzwe elandelayo.
Ephathekayo esirhabaxa Deadman Control oomatshini Sandblasting 300L
Umatshini ophathwayo we-Sand Grit onokuqhumisa ngombhobho
Ingcinezelo yesanti yokuqhumisa imbiza ifanelekile ukusebenza ixesha elide, okufana neeprofayili .steel pre-treatment.pipes.tanks rust and container re-furbishment
Uxinzelelo kumatshini wesandlblast uneemodeli ezininzi ezahlukeneyo onokuzikhetha: ulawulo lwencwadi, ulawulo lomoya kunye nolawulo lombane, umpu omnye okanye imipu engaphezulu.
Ukuza ngombhobho wesanti, umpu wesanti, isiphatho semilomo, kunye neempahla zesanti,
Izahlulo zeSandblaster Inayiloni yombhobho wokuKhawulezisa ukuBamba kunye noMnini weMipu yokuqhumisa
Suction Sandblasting Oomatshini for xa kuthe kwakho imbabala Long and big Parts
Zonke iintlobo zobuGcisa kunye nemisebenzi yezandla, iiplastikhi, izixhobo zentsimbi, ifanitshala, umhombiso wokucoca umphezulu, isandblasting ukususa imikrwelo
phucula uburhabaxa, phucula ukubambelela, coca umphezulu; bephosa iindawo, bexhentsa iindawo, iindawo unyango ubushushu ukuba isikali, umhlwa, iindawo ukulungiswa; ipolishi kunye matte.
Zonke iimveliso zesinyithi, iglasi, ubugcisa beplastikhi, ubucwebe, iiglasi, iiwotshi, zinokusetyenziselwa ukutshiza, ukufaka amandla kunyango lwangaphambi kokunyanga ukuphucula ukubambelela kwinto yokutyabeka (ukutyabeka) umphezulu kunye nayo yonke inyango yomphezulu
Sebenzisa izinto zentlabathi:
I-BAGUAN Abrasives yonikezelo olungapheliyo: isanti ye-corundum emdaka, isanti yeglasi, iglasi yesilicon khabhayithi, isanti ye-walnut, isanti ye-resin, i-emery, isanti ye-alumina, isanti yentsimbi, iibhola zentsimbi, amasuntswana eplastiki (isanti yenayiloni), ubuhlalu be-ceramic, njl.
Ingcinezelo ephezulu yezixhobo zeSandblasting zokuqhumisa ukungunda / iinxalenye zeemoto
Iiglavu zerabha ezi-1.24, ezinde ziyakuxhathisa ukunxiba nokukhusela umqhubi.
2. Isibane sothuli-ubungqina bokungaqhelekanga.
3. Ukungenelela kukhuseleko kuphazamisa ukuqhushumba ukuba ucango luvuliwe.
4.Ulwakhiwo lwentsimbi olwenziwe ngentsimbi, olugobileyo olwenziwe kakuhle, lwenza iqokobhe lekhabhinethi eliqinileyo, elihlala ixesha elide.
5. Iwindow yokujonga iglasi, iyatshintshana. 6. Isilawuli soxinzelelo, igeyiji, kunye neswitshi yombane efakwe ngaphakathi ukufikelela ngokulula.
7. Umpu omnye woxinzelelo ngoxinzelelo lwe-boron carbide umlomo 8mm.
8. Umpu owakhelwe ngaphakathi unceda ukugcina uthuli ngaphakathi kwikhabhinethi.
9.Ukutshintsha kwenyawo yokususa unyawo ukuze kusebenze uqhushumbo.
10. Isihluzi esomileyo sokucoca uthuli: Ukucoca ngesandla ukucoca.
Umthombo womoya woxinzelelo lwe-8bar (kg / cm2); Ukuhamba kwe-1.5-2m3 / min
Zenzekelayo zisebenzise kwakhona isanti yongcoliseko matshini oomatshini
I-vacuum yokubuyisela ukungabinanto okuzenzekelayo kwisanti yokubonisa ingqayi edityanisiweyo,
Inkqubo yokubuyisela inkunkuma kwimidiya, kunye nokuqokelela uthuli konke kuyunithi enye yecompact
(Iqukethe umatshini wokutsala ngokulawula okukude, umbhobho wokuqhushumba, indibano yentloko,
ukufunyanwa kwakhona kunye nokwahlulahlulwa kunye nenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo yomoya, umqokeleli wothuli kunye nenqwelo).
isetyenziswa ngokubanzi ukwehla, ukubhalwa komhlaba, kunye nokulungiswa kwepeyinti, esetyenziselwa ukucoca umhlwa ekususeni kwibala leoyile
Ukuvuselelwa kwesikhongozeli, njl njl, kunye nenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo yomoya eyenza ukuba isetyenziswe ngaphandle kothuli kunye nengxaki yokulahla.
Ukuqhuma kunye neenkqubo zokubuyisela kwimeko yesiqhelo zinokusetyenziselwa ukuqhambuka kunye nokufumana kwakhona (ukuvalwa kwesekethe evaliweyo) okanye kunokusetyenziselwa ukuvuthuza komoya kwaye emva koko kucocwe ngokukuko.
Ukuqhuma ngaxeshanye kunye nokubuyisa kuphelisa amafu othuli, ukubonakala okungalunganga kunye nokucoca ngexabiso.
Amandla okuqhuma okuzimeleyo kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwenza ukuba i-BRS ibe sisixhobo esivelisayo nesinezixhobo ezifanelekileyo kwizicelo ezininzi ezahlukeneyo.
I-Vacuum Blasting ilungele izinto ezinkulu ezinjengeenqanawa zeenqanawa, iitanki ezinkulu kunye nebhulorho yomphezulu.
Zenzekelayo uhlobo zilandelwa umatshini isanti ukuqhumisa
Zenzekelayo kulandelwa umatshini isanti ukuqhumisa
1..Ulawulo oluzenzekelayo .Ukuqhumisa isanti ngokuzenzekelayo ngesanti yokuqhumisa rhoqo.ukubeka indawo njl njl njl
Uyilo 3.Novel, ezintle, isakhiwo elula, kwaye kulula ukusebenza
Igubu phambi .kulula ukutshintsha kwaye uthathe iziqwenga zomsebenzi
5. Umatshini ufumanise isanti ngokudlulisa / indlela yebhakethi yokuhamba, unokusebenzisa nayiphi na isanti (njengentsimbi, isinyithi sokudubula njl.
6 Nge ububanzi ngemilomo eyi-esisi, ukusebenza koxinzelelo kumatshini sandblasting amaxesha 3-5times ngaphezu sokufunxa isanti umatshini kwakho imbabala
Ikhabhinethi ye-sandblast ngokuzenzekelayo yamalungu amancinci
Izinto zesanti ziyaqhushumba ngesantya esiphezulu sokunyanzela ukujikeleza kwiimveliso zeplastiki ukususa i-burr, i-flake, kunye ne-convex emngxunyeni weemveliso
Amandla okuqhumisa alawulwa ngotshintsho lwamaxesha kwiphaneli yokulawula.
Lo matshini kufakwa kukothuka kunye nenkqubo yokujikeleza ebuthathaka, izinto zesanti zinokuphinda zisetyenziswe.
i-burr entle kunye nezinto zesanti zinokuqokelelwa kuqokelelo lothuli, ezinkulu zinokuhluzwa ngescreen.
Kuxhotyiswe nge-anti-static motor kunye nomlomo, ukunciphisa i-burr kunye ne-powder adhesion kunye nokwandisa ubomi bento.
Igumbi lokuqhumisa lenziwa nge-band conveyor, kwaye ligutyungelwe irabha.
ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zemveliso.
Izinto ezisetyenziswayo zixhomekeke kwiimveliso
Umgangatho oPhezulu oPhezulu oQinisekayo oziQinisekayo ngokuzenzekelayo izixhobo ze-sandblaster HST-101
1. Esi sixhobo sinokuyilwa sinemipu esi-7 yokutshiza. Iidigri eziguqulwayo ezingama-360 ukuqinisekisa ukulingana kwesanti yomphezulu kumgangatho wemveliso
2. Eyona nto inkulu kwesi sixhobo kukuba i-turntable enkulu iyajikeleza ngokuqhubekayo,
akukho ndawo yokumisa embindini, kwaye ukusebenza ngokuqhushumba kuphuculwe kakhulu. Olu lukhetho lokuqala kwimisebenzi esemgangathweni emikhulu naphakathi.
3.I-turntable enkulu ijikeleza ngokuqhubekekayo, uguquko olungenanyathelo lokuhamba rhoqo luhlengahlengiswa, kwaye luhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi.